ကြော်ညာများ မပါတဲ့ အခပေး Facebook Version ထွက်လာမလား ? – DigitalTimes.com.mm
294 Shares 183 Views
ကြော်ညာများ မပါတဲ့ အခပေး Facebook Version ထွက်လာမလား ?
Ko Thuya Apr 14, 2018
Mark Zuckerberg က အမေရိကန် လွှတ်တော်ရဲ့ ကြားနာစစ်ဆေးမှုအတွင်းမှာ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Facebook Version က အမြဲ ရှိနေမှာပါလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အနာဂတ်မှာ ကြော်ညာများ မပါတဲ့ Facebook Version အသစ်တစ်ခု ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်များက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ ဗားရှင်းကို အခကြေးငွေပေး၍ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လွှတ်တော် အမတ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ Orrin Hatch က Facebook ကို အမြဲတမ်း အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဇူကာဘတ်က “There always will beaversion of Facebook that is free.” လို့ ဖြေကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခပေး ဗားရှင်းကို ဖြန့်ချီရတဲ့ အကြောင်းအရင်း နှစ်ချက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာ Users များရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို Facebook က မကောက်ယူချင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကြော်ညာများ မပါဘဲ ရှင်းလင်းတဲ့ Facebook ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အကြောင်းအရင်း နှစ်ခုဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကြော်ညာများ မပါတဲ့အတွက် Users များရဲ့ အမူအကျင့်များ၊ စိတ်ဝင်စားမှုများကို Facebook က ကောက်ယူဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ကြော်ညာများကို မပြသတဲ့အတွက် Facebook က အခကြေးငွေ ရရှိဖို့ Users များထံကနေ အသုံးပြုခကောက်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခပေး ဗားရှင်း အိုင်ဒီယာဟာ ယခုမှထွက်ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မကြာခင်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Facebook COO Sheryl Sanberg က ကြော်ညာများ မပါတဲ့ အခပေး ဗားရှင်းကို အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
Ref : wersm
ကွျောညာမြား မပါတဲ့ အခပေး Facebook Version ထှကျလာမလား ?
Mark Zuckerberg က အမရေိကနျ လှတျတျောရဲ့ ကွားနာစဈဆေးမှုအတှငျးမှာ အခမဲ့အသုံးပွုနိုငျတဲ့ Facebook Version က အမွဲ ရှိနမှောပါလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ အနာဂတျမှာ ကွျောညာမြား မပါတဲ့ Facebook Version အသဈတဈခု ထှကျလာနိုငျတယျလို့ ပညာရှငျမြားက သုံးသပျကွပါတယျ။ အဲဒီ ဗားရှငျးကို အခကွေးငှပေေး၍ အသုံးပွုရမှာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
လှတျတျော အမတျ တဈဦး ဖွဈသူ Orrin Hatch က Facebook ကို အမွဲတမျး အခမဲ့ အသုံးပွုနိုငျမလားဆိုတဲ့မေးခှနျးကို ဇူကာဘတျက “There always will beaversion of Facebook that is free.” လို့ ဖွကွေားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခပေး ဗားရှငျးကို ဖွနျ့ခြီရတဲ့ အကွောငျးအရငျး နှဈခကျြရှိနိုငျပါတယျ။ တဈခုမှာ Users မြားရဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို Facebook က မကောကျယူခငျြတဲ့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုက ကွျောညာမြား မပါဘဲ ရှငျးလငျးတဲ့ Facebook ကို အသုံးပွုနိုငျဖို့ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ အကွောငျးအရငျး နှဈခုဟာ တဈခုနဲ့ တဈခု ဆကျစပျနပေါတယျ။ ကွျောညာမြား မပါတဲ့အတှကျ Users မြားရဲ့ အမူအကငျြ့မြား၊ စိတျဝငျစားမှုမြားကို Facebook က ကောကျယူဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ကွျောညာမြားကို မပွသတဲ့အတှကျ Facebook က အခကွေးငှေ ရရှိဖို့ Users မြားထံကနေ အသုံးပွုခကောကျခံမှာ ဖွဈပါတယျ။
အခပေး ဗားရှငျး အိုငျဒီယာဟာ ယခုမှထှကျပျေါလာတာ မဟုတျပါဘူး။ မကွာခငျက အငျတာဗြူးတဈခုမှာ Facebook COO Sheryl Sanberg က ကွျောညာမြား မပါတဲ့ အခပေး ဗားရှငျးကို အရိပျအမွှကျပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။
Xiaomi က Black Shark အမည်ရ Gaming Phone ကို ကြေညာ
အင်တာနက် မပါတဲ့ Samsung Galaxy J2 Pro